Macdanta Palladium oo noqotay tan ugu qaalisan macdanaha, waxay ka sareysaa xataa Dahabka… – Hagaag.com
Macdanta Palladium oo noqotay tan ugu qaalisan macdanaha, waxay ka sareysaa xataa Dahabka…
Posted on 31 Oktoobar 2019 by Admin in Dhaqaalaha // 0 Comments
Palladium ayaa hadda ah macdanta ugu qaalisan adduunka, wuxuu ka sarreeyaa xitaa afarta macdan ee qaaliga ah, waxaana sabab u ah ku yaraantiisa suuqa oo ka dhigtay qiimahiisa mid cirka isku shareera, sidaasi Bloomberg ayaa soo werisay.
Qiimaha Palladium ayaa labanlaabmay hal sano ama kabadan, taasoo ka dhigeysa mid ka qaalisan Dahabka, Palladium ayaa loo isticmaalaa ka sameynta aaladaha la dagaalama wasakheynta hawada ee gawaarida iyo baabuurta waaweyn.
Ka Ganacsigii ugu dambeeyay ee Arbacadii, qiimaha Palladium wuxuu gaaray rikoor aad u sarreeya $ 1,824.50 ounce, iyada oo la filaayo in uu gaari doono $ 2,000 ama ka badan sanadka soo socda, sida ay sheegeen khubaro ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters.
Waa maxay Palladium?
Wax maado cad oo dhalaalaya, wuxuuna yahay mid ka mid ah lix macdan ee ka farcama Platinum oo ay weheliso Ruthenium, Rhodium, Osmium, iyo Iridium.
Qiyaastii boqolkiiba 85% Palladium waxaa loo isticmaalaa dhuunta qiiqa gawaarida, waxay gacan ka geysataa in sunta halista ah u badasho carbon-dioxide oo halistiisa ay yar tahay iyo uumi biyo.
Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa qalabyada elektarooniga, ilkaha iyo dahabka. Waxaa laga soo saaraa badanaa dalalka Ruushka iyo Koonfur Afrika, soo saaridiisa ayaa ah mid ka yar macdanaha kale sida Platinium ama Nickel.
2- Maxay qaali u noqotay?
Sababta ayaa ah in wax soo saarka uusan la mid ahayn baahida sii kordheysa ee Palladium. Adeegsiga macdantan oo sii kordhaya dawladaha waddamada oo aan ku jirin Shiinaha ay bilaabeen inay la dagaallamaan wasaqda ka soo baxda baabuurta isla markaana ku khasbaan shirkadaha soo saara baabuurta inay kordhiyaan qaddarka macdantan qaaliga ah ee ay isticmaalaan.
Palladium wuxuu kor u booday 22% sanadkii 2016 iyo 56% sanadkii 2017, iyo ilaa 16% sanadkii la soo dhaafay, wuxuuna sare u kacay 43% ilaa bilowgii sanadkan.